२०७१ माघ २ गते, शुक्रवार ०९:५६:४० बजे
नुवाकोट तारुकामा गोरु जुधाएर माघे सक्रान्ति मनाउने पुरानै चलन हो । तर, पछिल्ला समयमा यसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन थालेपछि स्वादेशी तथा विदेशी पर्यटकको लागि समेत मनोरञ्जनात्मक खेल बन्न पुगेको छ । यस बर्ष यहाँ १८ हल गोरु जुधाइयो भने स्थानीय तथा बाहिरका गरी दश हजार भन्दा बढीले यसबाट मनोरञ्जन लिए ।
२०७१ माघ २ गते, शुक्रवार ०९:४६:०५ बजे उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये एक हो ललितपुर । काठमाडौं उपत्यकाभित्र परे पनि ललितपुर विकट पहाडी जिल्लासमेत हो । ललितपुर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वका ठाउँहरुले गर्दा सुन्दर छ ।
२०७१ पुस १९ गते, शनिवार ११:५५:४४ बजे
२०७१ मंसिर २१ गते, आईतवार १५:०५:०९ बजे
२०७१ मंसिर १५ गते, सोमवार १०:३६:०७ बजे साथीसहित काठमाडौंबाट पोखरा घुम्न आएका शरद कार्कीले महेन्द्र, चमेरे र गुप्तेश्वर गुफा अवलोकन गरे । घुम्नु पनि अध्ययनकै एक हिस्सा मान्ने उनलाई चमेरे गुफाले बढी लोभ्यायो । कारण, उनले एकै ठाउँमा यति धेरै चमेरा यसअघि देखेका थिएनन् । काठमाडौंकै परोपकार आदर्श उच्चमाविकी शिक्षिका मदालसा सिंह पनि गुप्तेश्वर महादेव गुफामा विद्यार्थीसँग भेटिइन् । उनको समूहमा शिक्षक र विद्यार्थी गरी ४० जना थिए ।
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १६:३१:०६ बजे डोल्पाको नाम लिनासाथ हाम्रो दिमागमा एकसाथ आउने नाम हो- से फोकसुन्डो ताल । फ्रेन्च निर्देशक एरिक भ्यालीले ‘क्याराभान’ फिल्म बनाएपछि डोल्पाले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चा पाउन थाल्यो । नेपालको अग्लो र ठूलो तालमध्ये पर्ने से फोकसुण्डो ताल पुग्दा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ । छिनछिनमै परिवर्तन हुने पानीको रंगले तपाईको मनलाई थप रोमाञ्चक बनाइदिने छ । तालबाट निस्केको पानीबाट बनेको सुन्दर झरना अर्को महत्वपूर्ण दृष्यावलोकनस्थल हो ।
२०७१ मंसिर ५ गते, शुक्रवार ११:०१:५४ बजे कैलाश पर्वतलाई भगवान शिवजीको वासस्थल मानिन्छ । कैलाश पर्वत नजिकै रहेको मानसरोवर हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल पनि हो । तीन महिनाअघि एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेत स-परिवार मानसरोवर गएका थिए । शिवभूमि कैलाशको दर्शन गरेपछि स्वर्ग गइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । धार्मिक मात्रै नभएर पर्यटकीय हिसवाले पनि प्रख्यात रहेको कैलास पर्वत पदयात्राका लागि कठिन तर मनमोहक गन्तव्य हो ।
२०७१ मंसिर ५ गते, शुक्रवार १०:५३:५२ बजे
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ बाजुराको बडिमालिका । प्रकृतिक सुन्दरताले त अब्बल छ नै, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि पनि आफैमा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो बडीमालिका ।
२०७१ मंसिर ५ गते, शुक्रवार १०:४९:२५ बजे
यी तस्वीरहरु कुनै विदेशी भूमिमा खिचिएका होइनन् । हाम्रो नेपाल यति सुन्दर छ भनेर व्याख्या गरिरहनु सूर्यका सामु बिजुलीको बखान गरेजस्तो लाग्न सक्छ । नेपालमा महत्वपूर्ण विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको इन्द्र सरोवर नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय हो । यही सरोवरबाट निस्कन्छ कुलेखानी जलविद्युत् । प्रकृतिले बनाएका जलाशय र तालहरु बाहेक यति ठूलो ताल नेपालमा मान्छेले बनाउन सकेका छैनन् ।
२०७१ मंसिर ५ गते, शुक्रवार १०:४३:२२ बजे
प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर नेपालको चर्चित धार्मिक पर्यटकीयस्थल हो । तर, यो सुन्दर स्थलको दर्शन गर्ने अवसर धेरै मानिसले पाउन सकेका छैनन् । विगतमा यातायातको सुविधा नहुँदा पहाड चढ्न कठीन भए पनि अब स्वर्गद्वारीको यात्रा सहज बनेको छ । पहाडको टाकुरामा वरिपरि जंगल छ भने थुम्कोमा मुख्य मन्दिर छ । यही मन्दिरलाई ‘स्वर्गद्वारी’ भन्छि । पाँच पाण्डवले स्वर्ग जाँदा अन्तिम स्थान यहीे बाटो भएर गएकाले यसको नाम स्वर्गद्वारी रहेको किंवदन्ती छ ।
२०७० माघ २० गते, सोमवार ०९:५१:४१ बजे
गोरखा सदरमुकामबाट करिब चार पाँच घन्टा पैदल यात्राबाट पुग्न सकिने लिगलिगकोट गढी ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा अवस्थित छ।
२०७० माघ १५ गते, वुधवार १५:२७:११ बजे
मोरङ जिल्ला, हरैंचा गाविस वडा नं. १ का ४६ वर्षीय गणेशबहादुर श्रेष्ठ २०६९ असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक कतार गएका थिए। नेपाल रहँदा कुनै पनि रोगले गाँज्न नसकेका उनलाई कतार गएको २० दिनमै आँखामा एउटा अनौठो खालको रोगले सताउन थाल्यो।